AI selfie ကင်မရာနဲ့ အတူရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ Xiaomi Redmi S2 – AsiaApps
AI selfie ကင်မရာနဲ့ အတူရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ Xiaomi Redmi S2
May 11, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on AI selfie ကင်မရာနဲ့ အတူရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ Xiaomi Redmi S2
Xiaomi ဟာတော့ Entry-level စမတ်ဖုန်းအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့ Redmi S2 ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကပဲ တရုတ်မှာမိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ Redmi S2 ကို တရုတ်ပြည်တွင်းစျေးကွက်မှာ Redmi Note5ထက် မော်ဒယ်နိမ့်တဲ့ စမတ်ဖုန်းအဖြစ်မိတ်ဆက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ (Al selfie ကင်မရာ၊ Dual ကင်မရာနဲ့ အရွယ်အစားပိုင်းကြီးနေတာတောင် ခွဲခြားခံရတယ်ဗျ :’D)
Redmi S2 ရဲ့အရွယ်အစားဟာ ၅.၉၉ လက်မ အထိရှိနေပြီး Snapdragon 625 chipset နဲ့ပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။ MIUI9နဲ့ run သွားမှာဖြစ်ပြီး OS ကတော့ Android version 8.1 Oreo ဖြစ်မယ်လို့သိရပါတယ်။ Adreno 506 GPU ပါဝင်ပြီး HD+ resolution screen ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့အရှေ့မျက်နှာပြင် အရှေ့ဘက်မှာ Button တစ်ခုမှမပါဝင်ပဲ မှန်တစ်ခုလုံးနဲ့သာနေရာယူထားတာပါ။ (Entry-level စမတ်ဖုန်းဆိုပေမယ့် ဒီဇိုင်းအနေအထားကတော့ မခေလှဘူးဗျ။ ?).. ထုံးစံအတိုင်း ဖုန်းရဲ့အနောက်မှာတော့ Fingerprint scanner ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းရဲ့အရှေ့ Selfie ကင်မရာကတော့ AI-assisted ဖြစ်ပြီး 16MP ပါဝင်ပါတယ်။ အနောက် Dual ကင်မရာကတော့ 12MP + 5MP ဖြစ်ပြီး Redmi Note5တုန်းကလို EIS (Electronic image stabilization) နဲ့ပေါင်းစပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Redmi S2 ကတော့ 3GB RAM + 32GB storage နဲ့ 4GB RAM + 64GB storage ဆိုပြီး version နှစ်မျိုးထွက်ရှိလာမှာပါ။ microSD card အပေါက်ကတော့ version နှစ်ခုလုံးမှာပါဝင်ပါတယ်။
3GB RAM version ကို ယွမ် ၉၉၉ နဲ့ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး 4GB RAM version ကိုတော့ ယွမ် ၁,၂၉၉ နဲ့ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ Rose Gold, Champagne Gold, Platinum Silver အစရှိတဲ့ Color option ၃ မျိုးနဲ့ စတင်ရောင်းချနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
“Squirrel” လို့ခေါ်တဲ့ Messaging App တစ်ခုကို ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ Yahoo!!!